नेकपा (एस) काभ्रेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति आचार्यको भाषणमा किन बढी बज्यो तालि ? – मिलिजुली खबर
नेकपा (एस) काभ्रेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति आचार्यको भाषणमा किन बढी बज्यो तालि ?
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) काभ्रेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति मधु आचार्यको भाषणले पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रति कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताको बुझाई कस्तो रहेछ भन्ने छर्लङ भएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) काभ्रेले विजयादशमी, नेपाल सम्बत, दिपावली र छठ पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी ताली कांग्रेस सभापति आचार्यको भाषणमा बज्यो । प्रष्ट भाषण गर्ने कांग्रेस सभापति आचार्यले जब आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री हुँदा गरेको हर्कत जोस पूर्ण ढंगले राखे दर्शकदीर्घ र मञ्च दुबै तर्फको तालिले हल गुञ्जयमान भयो ।
अर्थात् सभापति आर्चायले बाँस्कोटा प्रति गरेको टिप्पणी जायज थियो । त्यसैले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता कार्यकर्ताले तालि बजाएर अनुमोदन गरे । सभापति आचार्यले सांसद र मन्त्री हुँदा जिल्लाको इज्जत बढ्ने भएतापनि गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री भएपछि जिल्लाको बदनाम भएको ठोकुवा गर्नुभयो ।
गोकुल बाँस्कोटा प्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनु भएका कांग्रेस काभ्रेका सभापति आचार्यले आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता ब्यक्तिको हिसाब किताब राख्न समेत मतदाता समक्ष अपिल गर्नुभयो ।
२०७४ सालको संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा गोकुल बाँस्कोटा ५४ हजार ४२७ मत ल्याएर विजयी हुँदा सभापति आचार्यले ३६ हजार ५७२ मत ल्याएर दोस्रो हुनुभएको थियो । सभापति आचार्यले मन्त्री हुँदा गरेका सबै अनैतिक कामको छिनोफानो आगामी निर्वाचनबाट हुने भन्दै भ्रष्टाचारीलाई जनताले समयमै चिन्न विशेष आग्रह गर्नुभयो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा बाँस्कोटा माओवादी र एमालेको साझा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । अहिले तत्कालीन नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित भएको छ । एमालेबाट बिद्रोह गरेर नयाँ दलमा आबद्ध हुनेमा काभ्रेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मै सबैभन्दा बढी छन् ।
गोकुल बाँस्कोटाले आफुमाथि लागेको ७० करोडको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आइरहनुभएको छ । त्यस्तै ७० करोड आरोपको बिरुद्ध ७० हजार मत ल्याएर चुनाव जित्ने दाबी गर्दै आइरहनुभएको छ । तर यो पटक बाँस्कोटालाई निर्वाचन निकै बारी हुने देखिएको छ ।
सभापति आर्चाय लगत्तै बोल्नु भएका कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व जिल्ला सभापति शिव हुमागाईंले गोकुल बाँस्कोटा प्रति केहि टिप्पणी गर्नु भएन् । सभापति आर्चायको भनाई नै पार्टीको आधिकारिक भनाई रहेको भन्दै उहाँले जिल्लाको भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको विषयलाई प्राथमिकता दिनु भएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ-सचेतक हुमागाईं
कांग्रेस धुलिखेल नगर सभापति बस्नेतले गरे पलाञ्चोक भगवती मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग